Jonga kakuhle uyilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuphuhlisa ifayile ye- ukujonga kakuhle uyiloKuya kufuneka ugxeke, uhlalutye kwaye uchonge uyilo olulungileyo, kuba kule ndawo kukho uyilo olungenakubalwa olubonakala yonke imihla.
Okwangoku, abantu bahlaselwa ngebhombu iintlobo ezininzi zoyilo Banikwa kumaqonga ahlukeneyo, nangaluphi na uhlobo lwefomathi, umbala kunye nemilinganiselo enokwenzeka, nangona kunjalo, ayizizo zonke izinto eziba mhle. Kungenxa yoko le nto sifuna ukuthetha kweli nqaku ngamanye izicwangciso ezivumela ukuphuhlisa ukujonga kakuhle uyilo.
1 Iindlela zokuphucula ukujonga kakuhle uyilo
1.1 Funa ugqozi kunye nokugxekwa
1.2 Ziqhelanise nokujonga, ngelixa ubona
Iindlela zokuphucula ukujonga kakuhle uyilo
Ziliqela buchule ezinokukunceda uhlakulele ukujonga kakuhle uyilo zezi:
Funa ugqozi kunye nokugxekwa
Yenza ifolda kwiLaptop yakho kwaye gcina yonke into ekhuthazayo kangange veki. Emva koko yiya kwifolda uze uzibuze malunga nala manqaku:
Kungenxa yokuba yintoni onomdla kuyilo olo?
Yintoni uyilo malunga, lukuchaphazela njani?
Uziva ntoni ngoyilo?
Le mibuzo ziphambili kuhlalutyo kwaye ucinge ngasemva koyilo, nto leyo eyakhokelela ekubeni umyili aphuhlise umfanekiso, umzobo, ifomathi, njl.njl. kubalulekile ukuba uzigcine engqondweni ubazise ebomini.
Ngaba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokuba ujonga phi kwizalathiso? Ukuba awazi apho unokufumana khona izikhombisi, Kukho iiwebhusayithi ezininzi ezinikezela ngohlaziyo rhoqo, njengewebhusayithi yeDribbble, i-InspirationGrid, i-Behance kunye ne-Awwwards, ezilungele iintlobo ezahlukeneyo zeeprojekthi.
Uhlalutyo ngalunye lodidi lweereferensi olufunyenweyo, lunokuvelisa ukuba unohlobo olunye kuphela lokujonga.
Uvumelekile ukuba ubone nganye iiklasi zobugcisa ezikhoyo kwaye ziyenziwa Ehlabathini lonke, nokuba zivela kwiimagazini, iiposta kunye nasezincwadini, musa ukuphelela kwi-Intanethi. Unokwazi ukukhangela isitalato ngokujonga ngeenxa zonke xa ushiya indlu. Ukujonga kukufunda!
Ziqhelanise nokujonga, ngelixa ubona
Zininzi iindlela zokuzilolonga ezivumela oko qeqesha ukujonga okuhle kuyiloUmzekelo, unokuchitha imizuzu embalwa ujonge kwaye uzama ukuqonda ilizwe elikungqongileyo. Ngokulinganayo, ungabona izakhiwo Oko ubona esitalatweni, imiqondiso, indalo, njl.
Xa usebenzisa umhlaba nayo yonke into ekujikeleze njengesixhobo sokuphucula ukujonga kwakho, kuya kufuneka uthathele ingqalelo le miba:
Fumanisa ukuba yintoni etsala umdla wakho kunye nesizathu kutheni isenza njalo, kuba uyilo lumalunga nokubonakala nje kokuqala.
Unxibelelana njani noyilo olukujikelezileyo?
Yiyiphi imibala esetyenzisiweyo kwaye isebenza njani kunye?
Ngaba ifomathi iyawenza umahluko? Ngoba?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Phuhlisa ukujonga okuhle kuyilo